Funda isiNgisi noma isiFulentshi eCanada - Isikole soLimi se-BLI eCanada
Ingabe unolimi olubili?Study English noma French
Funda i-English noma i-French eCanada futhi ube yingxenye yomndeni we-BLI.
Sisize izinkulungwane zabafundi ukuthi bafunde isiNgisi nesiFulentshi eCanada.
Funda isiNgisi noma isiFulentshi eCanadaBhukha manje - Funda kamuva
Uma uhlale uphupha ngokufunda phesheya, lesi yisikhathi esifanele sokwenza.
I-BLI Canada inikeza izaphulelo ezinhle ongazisebenzisa
uma ufuna ukufunda isiNgisi noma isi-French eCanada!
Bhuka inkambo yakho manje bese uqala osukwini oluzayo, lapho konke sekubuyele kokujwayelekile.
Ufuna ukufunda kusuka kunethezeka kwekhaya lakho?IsiNgisi nesiFulentshi izifundo online
Zonke izinhlelo ezikhona
Funda isiNgisi noma isiFulentshi eCanada noma ngabe ungeke ube lapha.
Thatha izifundo zesiNgisi noma ze-French online nothisha bethu baseCanada
ekilasini elinamasiko amaningi online futhi uthuthukise amakhono akho olimi.
Ungakhetha ezinketho zethu ezimbili:
Qala ukufunda isiNgisi noma isi-French online bese uqeda uhlelo lwakho eCanada
noma vele ukhethe inketho online.
Thola i-Level yakho yesiNgisiMahhala
Noma ngabe ufuna ukufunda isiNgisi eCanada kepha awazi ukuthi kuzokuthatha isikhathi esingakanani
ukufunda noma ukwazi ukukhuluma kahle ulimi, noma uma nje unelukuluku lokwazi ngezinga lakho lesiNgisi,
Ungathatha isivivinyo sethu sezinga lamahhala lesiNgisi futhi uthole namuhla.
Thatha isivivinyo sezinga
Ngabe ufuna ukwazi ukuthi liyini izinga lakho lesiFulentshi?Mahhala
Thola ukuthi lithini izinga lakho lesiFulentshi ngokuhlola izinga lethu lamahhala.
Noma ngabe ufuna ukufunda isiFulentshi eCanada kepha awazi ukuthi kuzokuthatha isikhathi esingakanani
ukufunda noma ukwazi ukukhuluma lolu limi, noma uma nje unelukuluku lokwazi ngezinga lakho lesiFulentshi,
Ungathatha isivivinyo sethu samahhala saseFrance bese uthola ukuthi namuhla.
English and French Online UkufundaFunda isiNgisi noma isi-French ONLINE
Bhalisa namuhla futhi
Funda isiNgisi noma isiFulentshi ngokunethezeka kwekhaya lakho. Uma uthintekile yisimo samanje somhlaba wonke, ungaqala uhlelo lwakho ekhaya bese uluqedela eCanada uma konke sekubuyele kokujwayelekile.
Uma ungenazo izinhlelo zokuza eCanada ngokuzayo, nawe ungazuza ngakho.
Ukufunda oku-inthanethiIZINDABA ZEZINKULO
Izikole Zolimi eCanadaStudy English noma French eCanada
Uma ufuna isikole esihle kakhulu sokufunda isiNgisi noma isiFulentshi eCanada, usesendaweni efanele.
I-BLI Canada inohlelo olifunayo. Sinikeza izifundo zesiNgisi neFrance eMontreal naseQuebec City kuwo wonke umuntu. Akunandaba ukuthi yini umgomo wakho, ku-BLI sizokusiza ukuwufinyelela.
I-BLI iqinisekisa ukuthi uzothola imiphumela oyifunayo. Sizokusiza ukufeza izinhloso zakho ngaphandle kwezinhloso zakho. Noma ngabe inhloso yakho ukufunda isiNgisi noma isiFulentshi ngenhloso ejwayelekile, yokufunda, yebhizinisi, noma yezivivinyo, sizokusiza ukuthi ufike lapho.
Sinezifundo ezinhlobonhlobo zazo zonke izigaba ngamamodi ahlukahlukene. Noma ngabe usaqala noma ungumfundi osathuthuka ofuna ukuphelela amakhono akho olimi endaweni ethile, othisha bethu bazokusekela ngale ndlela yokufunda.
Sinohlelo olufanele kuweIzinketho zohlelo
Izifundo zesiNgisi eMontreal noma ku-Inthanethi. Funda isiNgisi futhi uthuthukise amakhono amane olimi ayisihluthulelo: ukukhuluma, ukufunda, ukulalela nokubhala ngokusebenzisa izakhi zohlelo lolimi ngokufanele, ulwazimagama kanye nemisindvo.
Izifundo zaseFrance eMontreal, Quebec City noma Online. Zijwayeze ukuxhumana ngendlela ezenzekelayo nemvelo futhi ufunde ukuthi ungayiveza kanjani imicabango nemibono yakho ngokushelela nangokunemba ezimweni ezahlukahlukene.
IZIMIZI ZESIMI SOLIMI
Funda isiNgisi noma isiFulentshi Online. Amakilasi e-BLI Online afundiswa bukhoma ngothisha bethu abajwayelekile, abagxile emakhono okuxhumana. Amakilasi asingathwa epulatifomu yethu yokufundisa.
Inkambo yethu yokulungiselela ye-IELTS izokunikeza isingeniso sesakhiwo sohlolo lwe-IELTS kanye
Inkambo yokulungiselela ye-BLI TEFaQ igxile ekusizeni ukuthuthukisa amakhono owadingayo ukuze uphumelele kumamojula wokulalela nokulalela wohlolo lwe-TEFaQ.
Uhlelo lwe-BLI Business English luzokufundisa amakhono afundiswa ngumsebenzi. Ekupheleni kohlelo
Uhlelo lwe-BLI lwebhizinisi laseFrance luzokufundisa amakhono afundiswa ngumsebenzi. Ekupheleni kohlelo
Uma ungenasikhathi sokuzibophezela kuhlelo oluphelele ungabhalisela kwenye yezifundo zethu zesiNgisi nesiFulentshi ezinikezwa kusihlwa bese uqala ukuthuthukisa amakhono akho olimi namuhla.
Izifundo zezilimi ezimbili
Uhlelo lwe-BLI ngezilimi ezimbili kukunikeza ithuba lokufunda, ukubukeza nokwenza zonke izici zokufunda ulimi, ukumboza womane
Isheduli yethu yangempelasonto yakhelwe ukuthi ivumelane nendlela yakho yokuphila ematasa nezidingo.
Izinhlelo zeqembu le-BLI zinikeza umuzwa omuhle phesheya ohlanganisa ukufundwa kwesiNgisi nesiFulentshi ngezinto ezahlukahlukene ezijabulisayo endaweni ephephile nenakekelayo.
UKUFUNA KWAKHO KUKHANADAIzinhlelo zePathway
Ungathanda ukufunda eCanada esikhungweni esingemva kwesibili bese ngenxa yalokho uba yisakhamuzi saseCanada?
I-BLI yenza le nqubo ibe lula kakhulu. I-BLI Canada inezivumelwano ngenombolo enkulu noma izikhungo ezinikeza imfundo yasekondari. Uma uthatha uhlelo lwe-BLI lwendlela, uzothola ukuqeqeshwa okudingayo ukuze ufinyelele ezingeni elifanele lolimi oludingekayo ukuqala uhlelo olunjalo, kodwa okubaluleke kakhulu, uzolungela ukuphumelela uma uqala izifundo zakho zangemva kwesekondari.
Ukuthatha uhlelo lwe-BLI indlela kuzokusiza uthuthukise amakhono akho wokufunda nokubhala. Ngaphezu kwalokho, uzofunda amasu wokucwaninga kanye nezingxoxo ezizokuba wusizo ngokushesha nje lapho uqala izifundo zakho kwesinye sezikole esisebenzisana nazo.
Izikole ZethuIZIMBALI EZIMBILI ZOKUKHANYA
Funda isiNgisi noma isiFulentshi eCanada. Uma ufuna ukufunda isiFulentshi ungazikhetha phakathi kolimi lwethu iSikole eMontreal nesikole sethu saseFrance eQuebec City. Uma ufuna ukufunda isiNgisi, iBLI Montreal ikulindile
Ingabe unayo imibuzo